दलालले गरेको कर्तुत पर्दाफास भए पछि हंगामा मचियो यस्तो पनि हुदो रहेछ( हेर्नुस् याे भिडियो ) - Taja Report
Homeसमाचारदलालले गरेको कर्तुत पर्दाफास भए पछि हंगामा मचियो यस्तो पनि हुदो रहेछ( हेर्नुस् याे भिडियो )
दलालले गरेको कर्तुत पर्दाफास भए पछि हंगामा मचियो यस्तो पनि हुदो रहेछ( हेर्नुस् याे भिडियो )
July 8, 2018 समाचार Comments Off on दलालले गरेको कर्तुत पर्दाफास भए पछि हंगामा मचियो यस्तो पनि हुदो रहेछ( हेर्नुस् याे भिडियो )
दलालले गरेको कर्तुत पर्दाफास भए पछि हंगामा मचियो यस्तो पनि हुदो रहेछ, आङ कामी शेर्पा ( हेर्नुस् याे भिडियो )
दलालले गरेको कर्तुत पर्दाफास भए पछि हंगामा मचियो यस्तो पनि हुदो रहेछ, आङ कामी शेर्पा हेर्नुस् याे भिडियो ।
एजेन्सी- वर्तमानमा चलेको समयदेखि असन्तुस्ट हुने मानिस आफ्नो भविष्य कस्तो होला भन्ने विषयमा जिज्ञासु हुन्छन् । मानवले प्राचिनकाल देखि‘‘भविष्यका बारेमा जान्ने’ अनेक खालका तरिकाहरू प्रचलनमा ल्याइएका छन् जसमा हात हेर्ने, जन्म कुण्डलिनी हेर्न लगायतका अनेक तरिका छन् ।
तर एउटा अनौठा ज्योतिषी भेटिएका छन् जो महिलाहरूको भविष्य जान्नका लागि उनीहरूको स्तन मुसार्ने गर्दछन् । चीनको एउटा भिडियो सेयरिङ साइटमा पोष्ट भएको एउटा भिडियो दृश्यलाई आधार मान्ने हो भने एक झाँक्री एउटी युवतीको स्तनभित्र हात पु¥याएर उनको भविष्य बताइरहेका देखिन्छन् । भिडियोमा युवतीले अप्ठेरो मानेझैँ देखिन्छ ।
चीनको भिडियो सेयरिङ वेबसाइट ‘मियाओपाई’मा उक्त भिडियो पोष्ट भएको हो । झाँक्री एउटा हातले युवतीको स्तनभित्र हात घुसारिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनले दुईवटा वैशाखीसमेत लिएको देख्न सकिन्छ । उनले यो काम धेरै मान्छेहरूकै बीचमा रहेर गरेको देखिन्छ ।
युवतीले झाँक्रीको भविष्य पत्ता लगाउने तरिकालाई उति रुचाएको भने देखिन्न । युवतीपछि अन्य केही मान्छेहरू समेत भविष्यवाणी सुन्न उत्सुक भएर आफ्नो पालो पर्खेजस्तो समेत देखिन्छ ।
युवतीको छाती सुमसुम्याएर’ मात्र भबिष्य बताउने यी ज्योतिषकहा युवतीहरुको लामो लाइन
३ करोड नेपालीलाई खुशिको खबर : नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन (फोटो फिचर) (1,481)
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (351)
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ सुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ? थाहापाऊनुहोस् (334)
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (263)
के तपाईंले फर्सीको मुन्टो खाने गर्नु भएको छ भने , हेर्नुहोस् यस्तो हुन सक्छ ! पढेर शेयर गरौ!!! (134)
म सोच्थेँ बुवा लोभी भएर फाटेको जुत्ता लगाएको होलान् तर होइन रहेछ पैसा कमाउन गार्हो रहेछ (130)